खोप हराएको छैन, केही दिनमै सम्पूर्ण तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छौं : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा – Health Post Nepal
खोप हराएको छैन, केही दिनमै सम्पूर्ण तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छौं : स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा
२०७८ माघ २८ गते १२:२९
काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले २४ लाख डोज खोप हराएको भन्ने कुरामा छानविन भइरहेको बताएका छन्। कार्यकाल सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले खोप नहराएको र यसबारे छानविन भइरहेको बताए।
मन्त्री खतिवडाले खोप नहराएको दाबी गरे। उनले खोप विवरण संकलन कार्य देशभरबाट भइरहेको बताए। ‘२४ लाख डोज खोप हराएको छैन। गाउँगाउँमा पुगेको खोपको विवरण आउन बाँकी छ। विवरण संकलन कार्य जारी छ। कतिपय खोप खेर पनि गएका छन्। त्यसको तथ्याङ्क पनि आउन बाँकी छ। खोप लगाएर बाँकी रहँदा बचेको केही डोज खेर जान्छ’, उनले भने।
मन्त्री खतिवडाले खोप छानविनका लागि डा. गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा छानविन कमिटी बनाइएको बताउँदै केही दिनमा सम्पूर्ण विवरण र विस्तृत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने बताए। ‘यसका लागि हामीले डा. गुणराज लोहनीको नेतृत्वमा कमिटी पनि बनाएका छौं। आगामी फागुन १ र २ गतेभित्रै सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउँछौं। त्यसको तथ्याङ्क सबै आउँछ। सूचना संकलनको ग्यापले पनि खोपको तथ्याङ्कमा गडबडी आएको हुनसक्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने।
उनले कुन खोप कति लगाइएको, कति खेर गएको सबै एकएक गरेर सार्वजनिक गरिने बताए।